Daawo Sawirada R/Wasaare Saacid oo Indhihiisa kusoo arkay waxii shalay ka dhacay Xaruntii Turkiga ee la weeraray. - jornalizem
Daawo Sawirada R/Wasaare Saacid oo Indhihiisa kusoo arkay waxii shalay ka dhacay Xaruntii Turkiga ee la weeraray.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa saaka booqday xaruntii shalay kooxaha nabadiidku ay la beegsadeen qaraxa taasoo ay deganaayeen shaqaale u dhashay dalka Turkiga oo howlo samafal caafimaad ugu fidin jiray shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa booqashadiisa waxaa ku wehliyay Wasiirka Arrimaha Gudaha, Wasiirka Gaashaandhiga iyo Wasiirka Maaliyadda, waxayna kormeereen goobta qaraxu kad hacay, iyaga oo u kuurgalay baaxada saameynta qaraxa, waxayna warbixin ka dhegeysteen shaqaale Turki ah oo iyagu goob joog ahaa xilligii qaraxa.
Booqashada kadib, ayaa waxaa shir jaraa’id ku wada qabtay dhismaha shaqaalaha Turkida, Ra’iisul Wasaaraha iyo Safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Kamaludin Kani Torun.
“Waxaan aad uga tacsiyadeynayaa dhibaatadii halkan ka dhacday, waana cambaareyneynaa falkaan fuleynimo” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Saacid oo sidoo kale tacsi u diray qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ardaygii Soomaaliyeed ee qaraxa ku dhintay.
“Dawlada iyo shacabka Turkiga ma ilaawi doono kaalmadii ay shacabka Soomaaliyeed u fidiyeen iyo waqtigii adkaa ee ay garab istaageen ummadda Soomaaliyeed” ayuu mar kale yiri Ra’iisul Wasaaraha oo xusay in dawladda Soomaaliyeed ay xoojin doonto sugida amniga dalka, si qaab nabadeed ay ugu fulaan howlaha gargaarka iyo dib u dhiska ah ee ay dalka ka wadaan shaqaalaha Turkida.
Safiirka Dawladda Turkiga ee Soomaaliya Kamaludin Kani Torum ayaa isna sheegay in dawladda Turkiga ay sii wadi doonto isla markaana laban laabeyso taageerada dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed, ayna sii wadi doonaan mashaariicda horumarineed ee ay ka wadaan qeybo badan oo ka mid ah dalka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale, kormeeray dayactir ay shaqaalaha Turkigu ka wadaan wadada isku xirta Garoonka Aadan-cadde iyo isgoyska KM4, waxaana Ra’iisul Wasaaruhu uu carabka ku adkeeyey in dawladda Turkigu ay uga mahadcelinayaan kaalinta horumarineed ee ay ka wadaan dalka.